Fomba 7 hanomezana antoka ny tranokalan'ny mpanjifa | Martech Zone
Fomba 7 hanomezana antoka ny tranokalan'ny mpanjifa
Alakamisy Oktobra Oktobra 15, 2015 Denyse Drummond-Dunn
Vao haingana aho no nandinika tranokala CPG / FMCG orinasa ary tena nanaitra ahy izany! Ireo dia fikambanana misy ny mpanjifa amin'ny anarany marina ka izy ireo no tokony ho ivon'ny mpanjifa indrindra, sa tsy izany? Eny eny mazava ho azy!
Ary mbola vitsy amin'izy ireo no toa mandray ny fomba fijerin'ny mpanjifa rehefa mamorona ny tranonkalany. Na dia vitsy kokoa aza no faly nanosika ahy hiverina amin'ny tranonkalany, farafaharatsiny mba ho ela!
Amin'ny fanamarihako ireo tranonkala marobe dia toa ny ankamaroan'ny fikambanana no manangana ny tranonkalany hizara fitaovana amin'ny mpanjifany. Na izany aza, dia ny fampahalalana izy ireo te hizara fa tsy izay mety ho tian'ny mpanjifan'izy ireo.
Nahatonga ahy hieritreritra izay ho zava-dehibe, amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa, ny mampiditra ao amin'ny tranonkala iray. Ity ny lisitr'ireo zavatra fito, fa tiako ny hevitrao na ny fanampianao tao amin'ireo hevitra etsy ambany.
Ireo zavatra 7 TSY maintsy atao anaty tranokala
Rafitra mazava izay intuitive. Tokony mbola ampidiro sitemap ho an'ireo mila fanampiana fanampiny na izay tsy dia mitombina loatra amin'ny fikarohany.
Mora ny mahita rohy fifandraisana, na antsipirian'ny orinasa feno ao amin'ny pejy fandraisana. Tokony ao anatin'izany ny nomeraon-telefaona, mailaka, adiresy paositra sy arabe, ary sary masina ao amin'ny media sosialy. Tokony ho ao an-tsainao fa amin'izao andro izao, ny mpanjifa dia matetika mankany amin'ny tranonkala iray hahitana ny fomba hifandraisana amin'ny marika na orinasa. Noho izany ataovy mora araka izay azo atao izy ireo.
Lisitr'ireo marika, vokatra ary serivisinao. Koa satria mieritreritra marika alohan'ny sokajy ireo mpanjifa dia ampidiro ny sarin'izy ireo, miaraka amin'ny antsipiriany mifandraika toy ny atiny fonosana sy akora ilaina. Manampia tolo-kevitra fampiasana, indrindra raha misy fetrany, ary fampahalalana momba ny toerana hahitana azy, indrindra raha voafetra ny fizarana. Ireto ny zava-misy farany ambany tokony ampidirina, saingy mazava ho azy fa azonao atao ny mampiditra antsipiriany fanampiny fantatrao fa mety mahaliana sy manan-danja ho fantatr'ireo mpanjifanao.
Fizarana iray momba ny antsipiriany mampiseho ny antsipirian'ny orinasa, ao anatin'izany ny ekipany fitantanana - tsy (ireo) tale tsy mpanatanteraka fotsiny. Raha orinasa manerantany ianao dia ampio ireo faritra jeografika rakotrao ary manolora safidy fiteny amin'ny pejy fandraisana. Ny fanambaran'ny iraka ataon'ny orinasa, ny soatoaviny, ny paikadiny ary ny kolontsainy dia manan-danja ihany koa hizarana sy fanampiana amin'ny fananganana endrika tsara amin'ny mpanjifa. Na dia tsy maintsy manana sehatry ny haino aman-jery ho an'ny mpanao gazety sy ny mpampiasa vola aza ianao, ny mpanjifa koa dia te hahafantatra izay mitranga amin'ny marika ankafiziny, koa ampio ny sehatra vaovao misy ireo tantara farany.
Votoatiny sarobidy amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa. Ny tranokala dia tsy maintsy havaozina tsy tapaka ary hanana mifanentana amin'ny fitetezam-pejy miaraka amin'ireo sary sariaka amin'ny tranonkala. Koa satria ny sary sy horonan-tsary dia iray amin'ireo singa malaza indrindra amin'ny tranonkala, ampidiro izy ireo na asao ny mpanjifanao hanampy ny azy manokana.
Nanjary tranokala ankafizin'ny Purina i Purina noho ny atiny novokarin'ny mpampiasa, izay ampiany koa ny dokambarotra TVC sy pirinty farany azy. Tian'ny olona ny mijery, manome hevitra ary mizara fitaovana vaovao, koa amboary mora ho azy ireo ny manao izany ary manintona ny hiverina tsy tapaka handray ny vaovao farany.
Fizarana FAQ miaraka amin'ireo fanontaniana napetraka matetika. Ity faritra ity dia mila havaozina tsy tapaka miaraka amin'ireo fanontaniana tonga ao amin'ny tsipika fikarakarana sy ny ekipan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Ny fitaovana toy ny karoka, ny fisoratana anarana ary ny fisoratana anarana endrika, ary ny RSS fahana ho an'ny mpanjifanao dia mendrika ampiana, mba hanampiana azy ireo hitrandraka tsara ny atin'ny tranokalanao. Ho fanampin'izany, ny kaody fanaraha-maso sy famakafakana dia ahafahanao manaraka ny toerana sy ny fahitan'ny mpanjifanao azy matetika. Ity dia hanome fampahalalana bebe kokoa noho izay azo tamin'ny fanontanianao mivantana ny mpanjifanao, izay faritra mila fanovana na fanoloana.
Ohatra tsara ho an'ny aingam-panahy
Iray amin'ireo tranokala orinasa tsara kokoa hitako ary mahafinaritra be koa ny mifanerasera amiko, dia ny tranokalan'i Reckitt Benckiser. Tena nahaliana ahy sy nahasarika ahy nandritra ny fotoana vitsivitsy sy tamin'ny faritra maro samihafa. Ohatra, tsy ny lisitra mahazatra an'ireo marika sy ny logo misy azy, dia mampiseho izay antsoiny hoe azy Powerbrand ny tsipika naseho tamina talantalana na amin'ny efitranon'ny trano virtoaly (ekeko fa nahasosotra ahy kely ny vokany, fa azonao atao ny mamono azy ireo). Azonao atao ny manindry ny sarin'ny vokatra hahazoana fampahalalana bebe kokoa momba azy, ny sokajy ary ny dokam-barotra farany.
Ny fanasana ny fandraisan'anjaran'ny mpijery dia mandrisika ny olona hanindry ny marika rehetra hahalalana bebe kokoa momba azy ireo. Ary ny fampisehoana ifandraisan'ny tontolon'ny orinasa Reckitt Benckiser, amin'ny alàlan'ny fanolorana lalao sy fanamby, dia manampy antso avo hatrany, tsy ho an'ny mpanjifa ihany, fa ho an'ny mpiasa taloha sy ankehitriny ary mety ho azo atao ihany koa.
Topazo maso ny tranonkalany mifandraika etsy ambony ary ampitahao amin'ny tranonkalanao manokana. Iza no tianao handanianao fotoana? Ny tranokalanao ve orinasa na ivon'ny mpanjifa? Manana ny zavatra fito voalaza etsy ambony ve ianao amin'ny tranokalanao manokana? Raha tsy izany dia fotoana tokony hieritreretana ny mpanjifa aloha.
Denyse dia manana traikefa 30 taona mahery amin'ny anjara andraikitra ambony amin'ny Nestle, Gillette ary Philip Morris International. Nanangana izy ary filohan'ny C³Centricity, consultant manerantany izay manome torohevitra stratejika an'ireo ekipa mpanatanteraka marika amina miliara dolara. Ny bokiny farany Winning Customer Centricity dia efa misy izao.
Ahoana ny fomba hananana tombony amin'ny tatitra momba ny fiovam-po an'ny AdWords vaovao